ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင် သတိမထားမိဘဲ ဆံပင်ပျက်စီးအောင်လုပ်နေမိပြီလား? | CosmeticMyanmar
Home » Article » ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင် သတိမထားမိဘဲ ဆံပင်ပျက်စီးအောင်လုပ်နေမိပြီလား?
ပျိုလေးတို့ထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့ဆံပင်ကို ပျက်စီးအောင်လုပ်နေမိတဲ့သူရှိလား? ဟင် ဘယ်လိုမေးခွန်းကြီးမေးလိုက်တာပါလိမ့်လို့ထင်စရာပါ။ ဘယ်သူကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ဆံပင်ပျက်စီးပါစေလို့တော့ လုပ်မလဲနော်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ ပျိုတို့တွေတောင် သတိမထားမိဘဲလုပ်နေမိတဲ့ အမူအကျင့်တစ်ချို့ကဆံပင်တွေကိုပျက်စီးစေနိုင်တာမို့ အဲဒီအမူအကျင့်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
၁။ ဆံပင်ကို လိုတာထက်ပိုလျှော်မိခြင်း
ဆံပင်ကိုပုံမှန်လျှော်ရင် အညစ်အကြေးတွေကင်းစင်စေတာမှန်ပေမယ့် တစ်နေ့ကို ၂ခါ ၃ခါလျှော်ရင်တော့ ဆံပင်မှာရှိသင့်တဲ့ သဘာဝအဆီတွေကုန်ခမ်းပြီး ဦးရေကိုခြောက်သွေ့စေတာမို့ ဗောက်ထခြင်းတွေ၊ ဦးရေပြားယားယံခြင်းတွေဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဆံပင်ကို တစ်နေ့တစ်ခါထက်ပိုမလျှော်သင့်ပါဘူး။
၂။ ဆံပင်ကို ခေါင်းသုတ်ပုဝါနဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပွတ်ပြီး အခြောက်ခံခြင်း
ခေါင်းလျှော်ပြီးတဲ့အခါမှာ စိုနေတဲ့ဆံပင်တွေကို ခေါင်းသုတ်ပုဝါနဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ခပ်မြန်မြန်ပွတ်ပြီး အခြောက်ခံတာက အမှန်တော့ ဆံသားအချင်းချင်းကို ပွတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်စေတာမို့ ဆံသားကိုပိုပြီးကြမ်းလာစေနိုင်ပါတယ်။
၃။ Hairdryerကို အပူချိန်များများထားပြီး အသုံးပြုခြင်း
ပျိုလေးတို့လည်း သိကြမှာပါ၊ ဆံပင်ကိုအဓိကပျက်စီးစေတာကအပူဒဏ်ဆိုတဲ့အချက်ကို။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့သိရက်နဲ့ ဆံပင်ကို မြန်မြန်ခြောက်အောင်နဲ့ပုံကျအောင်ဆိုပြီးHairdryer ကို အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာထားပြီး သုံးမိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သတိပြုရမှာက အပူချိန် ၁၅၀°Cနဲ့အထက် အပူချိန်တွေမှာ ဆံပင်တွေကပိုပြီး ကျိုးလွယ်ပျက်လွယ်လာသလို အပူချိန် ၂၃၀°Cနဲ့အထက်ဆိုရင်တော့ ဆံပင်မှာရှိတဲ့ bondလေးတွေပျက်စီးသွားစေနိုင်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။
၄။ ဆံပင်စိုနေတဲ့အချိန်မှာ ဘီးနဲ့ဖြီးမိခြင်း
ဆံပင်စိုနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် ဆံသားလေးတွေကပိုပြီး ကျိုးလွယ်တာကြောင့် အဲဒီအချိန်မှာ ဘီးနဲ့ဖြီးချလိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဆံသားတွေကိုပိုပြီး အားနည်းစေနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ပျိုလေးတို့အနေနဲ့ ခေါင်းလျှော်ပြီးလို့ ဆံပင်တွေရှုပ်ထွေးနေမှာစိုးရင် ဆံပင်ကိုမလျှော်ခင်ထဲက ဖြီးထားလို့ရသလို ဆံပင်ကိုလုံးဝအခြောက်ခံပြီးမှ ဖြီးရင်လည်းရပါတယ်။
ကဲအခုဖော်ပြလိုက်တဲ့ အမူအကျင့်တွေက ပျိုလေးတို့တော်တော်များများ ပြုလုပ်တတ်တဲ့အမူအကျင့်လေးတွေဖြစ်လို့ အချိန်မီသတိထားမိပြီးပြင်နိုင်စေဖို့ ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်နော်။
References : https://dailyvanity.sg